म मन्दिर हु मायाको कसैले तोडेर केभो? म एक्लै छु यो भिडमा कसैले छोडेर केभो? : जानकी पन्त – Complete Nepali News Portal
म मन्दिर हु मायाको कसैले तोडेर केभो? म एक्लै छु यो भिडमा कसैले छोडेर केभो? : जानकी पन्त
लेख्नु हुन्छ : म मन्दिर हु मायाको कसैले तोडेर केभो? म एक्लै छु यो भिडमा कसैले छोडेर केभो? म मुहान हु मायाको एक बाध टुटेर केभो? म पुजारी हु मायाको एक पुजा रुकेर केभो? म तृप्ति हु आफ्नै तृष्णाको केहि पल तड्पेर केभो? म उमंग हु आफ्नै मनको केहि रहर रुझेर केभो? म सागर हु मायाको केहि जहर पिएर केभो?
म अनुरागी आफ्नै हृदयको फेरी यो मन दुखेर केभो? म उपहार हु आफैमा कसैले नअपनाएर केभो? म नजिग छु आफूमा अरु ट़ाढीएर केभो? म आवाज हु आफ्नै आत्माको फेरि अरु नबोलेर केभो?
म आकाश हु आफ्नै भावनाको केहि भाव भुइमा गिरेर केभो? म बादल हु आसुको सागरको केहि बुद् भुइमा झरेर के भो? म महल हु सुन्दर कल्पनाको केहि सपना बिग्रेर केभो?
म किरण हु आफ्नै खुशीको केहि दुख जीबनमा झेलेर केभो? म धर्ती हु धैर्यताको थोरै साहास जीबनमा टुटेर केभो? म भरोशा हु आत्मबिश्वासको केहि आश जीबनमा मरेर केभो? म प्रकाश हु आफ्नै आत्माको केहि दीप जीबनमा निभेर केभो?
म मन्दिर हु मायाको कसैले तोडेर केभो? म एक्लै छु यो भिडमा कसैले छोडेर केभो?